Venerable Kusalasami: April 2012
ဓမ္မစကူးလ်ဖြစ်မြောက်ရေး စုပေါင်းစည်းဝေးပွဲ (အပိုင်း ၅)
Posted by lwin at 6:28 PM 1 comment:
ဓမ္မစကူးလ်ဖြစ်မြောက်ရေး စုပေါင်းစည်းဝေးပွဲ (အပိုင်း ၄)
Posted by lwin at 6:28 PM No comments:
ဓမ္မစကူးလ်ဖြစ်မြောက်ရေး စုပေါင်းစည်းဝေးပွဲ (အပိုင်း ၃)
Posted by lwin at 6:27 PM No comments:
ဓမ္မစကူးလ်ဖြစ်မြောက်ရေး စုပေါင်းစည်းဝေးပွဲ (အပိုင်း ၂)
Posted by lwin at 6:26 PM No comments:
ဓမ္မစကူးလ်ဖြစ်မြောက်ရေး စုပေါင်းစည်းဝေးပွဲ (အပိုင်း ၁)
Posted by lwin at 6:25 PM No comments:
ရောက်တတ်ရာရာ ရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို ရောက်တတ်ရာရာ ပြောပြမိတာပါ။
စာရေးတာတော့ ၀ါသနာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာက မရေးတတ်ဘူး။ ပြောကြတယ်ပေါ့။ ကလောင်စွမ်း ပြပါအုံး။ စာတွေ အဆက်ပြတ်လှချည်လား။ ရေးပါအုံး။ ဦးဇင်း ကလောင်စွမ်းက ထက်တယ်။ ရေးပါအုံး။ အွန်လိုင်းမှာ ဘာကိစ္စလေးတော့ ပြောနေကြတယ်။ ၀င်ပြောပါအုံး။ ရေးပါအုံး။ ကိုယ်တော့်အမြင်လေး ရေးပါအုံး။ ဘယ်ရောက်နေတာလဲ။ ကိုယ်တော့်ဆိုက်ကို နေ့တိုင်း ရောက်တယ်။ အသစ်လည်း မတွေ့ဘူး။ လုပ်စမ်းပါအုံး။ ရဟန်းတော်များရဲ့ အမွေအနှစ်ကလည်း ရေးထားတာ မပြီးသေးဘူး။ ဆက်ပါအုံး။ ဒီက စောင့်ဖတ်နေတာ။ သာသနာနဲ့နိုင်ငံရေးကို ဆက်မရေးတော့ဘူးလား။ စာအုပ်များနဲ့ ခရီးသွားခြင်း ဆောင်းပါးတွေဆို အရမ်းကြိုက်တာ။ ဆက်ရေးပါအုံး။ ကိုယ်တော် ရွေးထားတဲ့ အင်တာဗျူးလေးတွေဆို အရမ်းဗဟုသုတရတယ်။ လုပ်ပါအုံး။ အဲဒီလို ရှာရှာဖွေဖွေလေးတွေ ရေးပါအုံး။ ဇင်အကြောင်းလေးတွေက တိုတိုလေးတွေနဲ့ ဟာတ်ထိတယ်။ ဇင်ဇာတ်လမ်းတွေက ဘယ်နှစ်ပုဒ်ရှိတာလဲ။ ဆက်ရေးပါအုံး။ ဟို ဘုရားဟောဝတ္ထုလေးတွေကို ကိုယ်ပိုင်အမြင်လေးတွေနဲ့ တွေးပြတာ သိပ်ကောင်းတယ်။ ဆက်မရေးတော့ဘူးလား။ ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲ။ အလုပ်တွေ ရှုပ်နေလို့လား။
ဟို မဟနအကြောင်းတွေဆို ဖဲ့ထားတာ မိုက်တယ်။ အဲဒီလိုလေးတွေလည်း ဆော်ပေးမှ။ ဆရာတော်ကြီးတွေ ကန်တော့ပါရဲ့။ အင်း… ဒါပေမယ့် ရေးတော့ ရေးရမှာပဲ။ ကိုယ်တော့်စာတွေ ကြိုက်ပါရဲ့…။ မဟနတွေကို ရေးထားတာတွေတော့ မကြိုက်ဘူး။ စိတ်မကောင်းဖြစ်လွန်းလို့။ အဲဒါမျိုးတွေတော့ မရေးပါနဲ့။ ဟို ရန်ကုန်သွားတောလားလို ခရီးသွားအတွေးဆောင်းပါးတွေတော့ အတော်သဘောကျတယ်။ ရန်ကုန်ရောက်နေတုန်း အဲဒါလေးတွေ ဆက်ရေးပါ့လား….။
အဲဒီလိုတွေ ပြောကြတိုင်း အားနာတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ့်ဆိုက်က ရက်အတော်ကြာကြာ ဘာမှမတင်ဘဲ အဆက်ပြတ်နေတတ်တာကိုး။ ၂၀၀၈-ခုနှစ် ပြည်ပစရောက်ကတည်းက ဘလောဂ်လေး စလုပ်ပြီး စာတွေ ရေးခဲ့တယ်။ အချို့ကတော့ အားပေးကြတယ်။ အချို့ကတော့ သမ ကြတယ်။ ရေးခဲ့တဲ့စာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အချို့ကတော့ ချီးကျူးကြတယ်။ အချို့ကတော့ ကိုယ့်စာတွေကို ကဲ့ရဲ့ကြတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနေ့ထိတော့ ရေးဖြစ်နေဆဲပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတလေ စာအရေးကျဲတယ်။ တစ်ခါတလေ ဆက်တိုက်ရေးဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် ခရီးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စာအရေးကျဲသွားတတ်တယ်။ နောက်ပြီး အလုပ်တွေ ဆက်တိုက်လုပ်နေရတဲ့အခါ …. နောက်ပြီး ရေးချင်တာတွေ များလွန်းနေတဲ့အခါမှာ စာမရေးတတ်တော့ဘူး။ မောင်လှမျိုး(ချင်းချောင်းခြံ)က မြိုသိပ်ပါများလို့ အသွားရတဲ့သူတစ်ယောက်ပါလို့ ပြောခဲ့တယ်။ အဲဒီလို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ပြောချင်တာ များလွန်းလို့ မပြောနိုင်ဖြစ်သွားသူလို့ ပြောရမလားပဲ။ နောက်တစ်ခုလည်း ရှိသေးတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အတွေးအခေါ်အယူအဆ အပြောင်းအလဲတွေ၊ အမြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ကလည်း ကြုံရသေးတယ်။ အဲဒီကာလမျိုးမှာလည်း စာမရေးတတ်ဘူး ဖြစ်သွာတတ်တယ်။
ဒါဆို ဘယ်လိုအချိန်မှာ စာတွေ အများကြီး ရေးဖြစ်သလဲ ……?
ရင်ထဲမှာ အလွန်ကို ချမ်းမြေ့ကြည်နူးတဲ့အခါ ….
ရင်ထဲမှာ မကျေမနပ်တွေ အလွန်ဖြစ်နေတဲ့အခါ ….
အသိတစ်ခုခုကို မျှဝေချင်တဲ့အခါ ….
တစ်စုံတစ်ယောက် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကို ပြောပြချင်နေတဲ့အခါ ….
ဒီအချိန်တွေမှာပဲ စာတွေ ရေးဖြစ်တာ တွေ့ရတယ်။ ရင်ထဲမှာ ချမ်းမြေ့ကြည်နူးနေတဲ့အခါမှာ ရေးတဲ့စာတွေက သာသာယာယာကြည်နူးဖွယ်လေးတွေ ဖြစ်နေတတ်တယ်။ စိတ်အာဟာရတို့၊ နေ့တစ်နေ့ကို ဖြတ်သန်းခြင်းတို့၊ ငြိမ့်..ငြိမ်…ငြိမ်းတို့၊ စတဲ့ဆောင်းပါးတွေက စိတ်ထဲမှာ ကြည်နူးနေမိလို့ ရေးဖြစ်တဲ့ ဆောင်းပါးတွေ ဖြစ်နေတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံတော့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကြောင့်၊ သို့မဟုတ် ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းအပေါ် ထိခိုက်စေတဲ့ လက်မခံနိုင်ဖွယ်ရာတွေ တွေ့လာရတဲ့အခါ ရင်ထဲမှာ မကျေမနပ်ဖြစ်တယ်။ ဒီအချိန်မှာ မရေးရ မနေနိုင်တော့ဘူး။ မဟနအကြောင်းတွေ ရေးဖြစ်တာလည်း ဒီအကြောင်းကြောင့်ပဲ။ အချို့ကတော့ ပြင်းထန်လွန်းတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဦးဇင်းရေးတာ ပြင်းထန်လွန်းမနေဘူးလား။ ဟုတ်တယ်။ ပြင်းထန်တာပေါ့။ ပြင်းထန်ရုံမကဘူး၊ ကြမ်းတောင်ကြမ်းနေသေးတယ်။ အော် … ဒီလို သိရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ အဲ့လို ရေးရတာလဲ။ အကြောင်းရှိပါတယ်။ ဒီမဟနဆိုတာ သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ အာဏာအရေခြုံလိုသူအချို့ ပါဝင်နေတယ်။ တစ်ဖက်ကကြည့်ရင် သူတို့ရဲ့ ပုဂ္ဂလိကဖြူစင်မှုတွေ ဘယ်လောက်ရှိနေပါစေ၊ အာဏာရှင်တွေ လက်ကိုင်တုတ်သဖွယ် ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ဒါမျိုးဖြစ်နေတာ ကြာပြီ။ ဒါမျိုးအခြေအနေကို ငြင်းနိုင်တဲ့ကိုယ်တော်ရှိရင် ပြောစမ်းပါ။
နိုင်ငံက အပြောင်းအလဲကာလမှာ ဒီမဟနတွေကတော့ အာဏာရှင်ဂိုက် ဖမ်းပြနေတယ်။ ဒါကို ပြောမယ့်သူက သိပ်နည်းတယ်။ သိတဲ့လူတွေလည်း သိပ်နည်းတယ်။ ဒီလို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ရေးလိုက်တော့ လူတွေ ပိုသိသွားတယ်။ ပိုသိသွားတော့ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ နားလည်သွားကြတယ်။ ဘုရားရှင် ၀ိနည်းတွေ ပညတ်တဲ့နေရာမှာ လူအမြင် သင့်တော်အောင်၊ လူတွေ မကဲ့ရဲ့အောင်ဆိုတဲ့ အချက်တွေ ပါတယ်။ အခု မဟနတွေ လုပ်ပုံက လူတွေ ကဲ့ရဲ့စရာ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကို ခပ်မြန်မြန် သိစေချင်တယ်။ တစ်ခါတလေ တစ်ခုခုဖြစ်စေချင်လို့ တစ်ခုခုကို ပေးဆပ်ပစ်လိုက်ရတာတွေလည်း ရှိသပေါ့။
တစ်ခါတစ်ခါကျတော့ ကိုယ်နေတဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က ကိုယ်နဲ့ဆက်စပ်သူတွေအကြောင်း ရေးချင်တယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ ချီးမွမ်းချင်လို့ ရေးတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ သရော်ချင်လို့ ရေးတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါမှာတော့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ထဲမှာ ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့သရော်ခြင်းကို နှစ်မျိုးလုံးပါအောင် ချိန်ထိုးရင်း ပါဝင်စေတယ်။ ချီးမွမ်းခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်း ဆောင်းပါး၊ ချီးမွမ်းခြင်းအလှ၊ ဘ၀ထဲက အမြင်၊ အမြင်ထဲက ဘ၀၊ မြင်နိုင်ခဲသော အဇ္ဈတ္တများ၊ ချိုသောစကားနှင့် ခါးသီးသောရင်ဘတ်များ …. စတာတွေပေါ့။ အခွင့်အရေးဆောင်းပါးဆိုရင် ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ ၀န်းကျင်မှာ ကိုယ်စက်ဆုပ်မိတဲ့သူများကို တွေ့လို့ ရေးမိတယ်။ စက်ဆုပ်မိသူတွေ ရေးရင်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်လည်ဆုံးမတဲ့ အနေအထားလေးတွေလည်း ထည့်ရေးမိတယ်။
အချို့တွေက အခွင့်အရေးတစ်ခုအတွက် အရာရာကို လုပ်ဝံ့တယ်။ အခွင့်အရေးဆိုတာ ကောင်းတဲ့ဘက်၊ ဆိုးတဲ့ဘက်ဆိုတာ ရှိတယ်။ အခွင့်အရေးတစ်ခုကို ဆုပ်ကိုင်နိုင်မိဖို့အတွက် အချို့က သိက္ခာတရားတွေကို စတေးပစ်တယ်။ အချို့က အဲဒီအချိန်မှာ အာဏာရှင်အစိုးရက ရှိနေသေးတော့ အာဏာရှင်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ရယ်စရာဖြစ်နေတာက ဘာမဟုတ်တဲ့ ရာထူးအာဏာလေးတွေကို အငမ်းမရ လိုချင်နေတယ်။ ဒီအာဏာလေးရဖို့ စည်းရုံးရေးတွေ ဆင်း၊ ရင်တုန်ပန်းတုန်တွေ ဖြစ်လိုဖြစ်၊ အခြားသူတွေက မလိုချင်လို့ မယူတာကို အထင်အမြင် သေးလိုသေး။ အကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့ ကျရှုံးမိပြန်တော့ ကျိတ်မနိုင်ခဲမရတွေ ဖြစ်၊ ဒီအာဏာလေး ပြန်ရဖို့ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးတွေကို အကြီးအကျယ် စဉ်းစား။ ဒါတွေကို တွေ့မြင်နေရတော့ သရော်ချင်လာတယ်။ ဒီတော့ စာတွေ ရေးဖြစ်ပြန်သပေါ့။
ကိုယ်ရေးဖြစ်တာတွေ၊ ကိုယ်တင်ဖြစ်တာတွေ ပြန်ကြည့်မိတော့ ရောက်တတ်ရာရာတွေပါပဲ။ အချို့ရင်ဘက်မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေက ကိုယ်တင်လိုက်တဲ့စာတွေ ဖတ်ပြီး ကိုယ်ဘာဖြစ်နေတယ်၊ ဘာခံစားနေရတယ်၊ ဘာတွေ ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာကို သိကြတယ်။ ဒီလိုဆိုတော့ ကိုယ်ရေးဖြစ်တာတွေက စာတွေ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ရင်ခုန်သံတွေများ ဖြစ်နေမလားပဲ။ ကိုယ့်စိတ်တွေများ ဖြစ်နေမလားပဲ။ စတ်ဆိုတာ ရောက်တတ်ရာရာ သွားတတ်သတဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကိုယ် စာမရေးဖြစ်ပါဘူး။ စိတ်တွေပဲ ရေးခြစ်နေမိတာပါ။
Posted by ashin kusalasami at 4:59 PM2comments:
အခုတစ်လော အမှားတွေအကြောင်း ပြောဖြစ်ကြပါတယ်။ အမှားဆိုတာ လူတိုင်း ကြုံတွေ့တတ်တဲ့အရာ ဖြစ်သလို အမှန်နဲ့ယှဉ်ပြီး အပြောအများဆုံး စကားလုံးတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်တစ်ခုကို စတင်ပြီဟေ့ဆိုတာနဲ့ လူတိုင်းဟာ အမှန်ဆိုပြီး လုပ်ကြတာပါပဲ။ အမှန်တွေကို လုပ်ရင်းနဲ့ အမှားတွေ ကြုံတွေ့၊ အမှားတွေကနေ သင်္ခန်းစာယူပြီး အမှန်လမ်းကို ပြန်ရောက်အောင် ကြိုးစားလျှောက်လှမ်းကြရတာပါပဲ။ အမှားတွေ များပေမယ့် ခြုံကြည့်လိုက်ရင် စိတ်ကူးအမှား၊ အပြောအဆိုအမှား၊ အပြုအမူအမှားဆိုတဲ့ သုံးမျိုးကိုပဲ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အမှားဆိုတာ လူတိုင်း၊ နေရာတိုင်း ကြုံရတတ်တယ်၊ လုပ်မိတတ်တယ်ဆိုပေမယ့် သိတဲ့အချိန်မှာ ရပ်တန့်ပစ်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ အမှားတွေထဲက စိတ်ကူးမှားအဆင့်မှာ ရပ်တန့်ပစ်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ စိတ်ကူးအဆင့်မှာ လူမမြင်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ရယ်၊ အခြားသူတွေကို အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိသေးတဲ့အတွက်ရယ် အန္တရာယ်မကြီးလှသေးပါဘူး။ ဒီအဆင့်မှာ ပြင်လိုက်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ အပြောမှားနဲ့အပြုအမူမှားကျတော့ သူတစ်ပါးနဲ့ ထိတွေ့လိုက်ရပြီ။ ကြားရသူ၊ ခံရသူဆီက အမှားရဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေ ရလာတော့မယ်။
အချို့က အမှားတစ်ခု ကျူးလွန်မိပြီဆိုတာနဲ့ ချက်ချင်းသိတယ်။ သိသိချင်း တောင်းပန်သင့်တာ တောင်းပန်ပြီး ပြင်လိုက်တယ်။ အချို့ကတော့ ခံရသူထံက တုန့်ပြန်မှုကို ရမှ သိတယ်။ သိသိချင်း ပြင်နိုင်ရင် သို့မဟုတ် သိသိချင်း အမှားကို ၀န်ခံလိုက်ရင် အမှားကျူးလွန်မိပေမယ့် အကျိုးဆက်က ကျေနပ်စရာအတိ ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
အမှားတွေအကြောင်း ပြောကြတိုင်း မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ မဟာအမှားကြီးကို ထည့်ထည့်ပြောတတ်ကြတယ်။ ထမင်းမစား၊ ရေမသောက်၊ အပေါ့အပါး မသွားဘဲ ပြင်းထန်စွာ ကျင့်ခဲ့တဲ့ ဒုက္ကရစရိယာအကျင့်အကြောင်း ပြောတတ်ကြတယ်။ မြတ်စွာဘုရားလောင်းဟာ ဒီအကျင့်မှားကြီးနဲ့ ၆-နှစ်လောက် ကျင်လည်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် သူဟာ အာဇာနည်ပီပီ သူ့အမှားကို သူကိုယ်တိုင် သိမြင်ပြီး ပြင်ခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ဘုရားဖြစ်သွားတယ်။ ဒါကို ကြည့်ပြီး ဒို့ဘုရားတောင် မှားခဲ့သေးတာပဲဆိုပြီး အမှားလုပ်သူတွေ ဖြေတတ်ကြတယ်။ သေချာတာကတော့ အမှားဆိုတာက ပြဿနာမဟုတ်ဘူး။ အမှားကို ၀န်ခံဖို့နဲ့ ပြုပြင်လိုက်ဖို့ပါပဲ။
၀ီလျံအာသာဝက် ပြောတဲ့ To make mistake is human, to stumble is common place, to be able to laugh at yourself is maturity ဆိုတဲ့ စကားလေးက မှတ်သားဖို့ ကောင်းတယ်။ လူဆိုတာ အမှားနဲ့ မကင်းဘူး၊ အမှားဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာ ဖြစ်မြဲပဲ၊ အမှားလုပ်မိတဲ့အခါတိုင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ရယ်(လှောင်)နိုင်စွမ်းရှိတာကတော့ ရင့်ကျက်မှုပဲ လို့ ဘာသာပြန်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ အမှားကို ၀န်ခံလိုက်တာ၊ ကိုယ်မှားလိုက်ပြီဆိုတာကို သိလိုက်နိုင်တာဟာ တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
အမှားတွေအကြောင်း သို့မဟုတ် အမှားတွေကို ၀န်ခံလိုက်ဖို့ ပြောကြဆိုကြတိုင်း ပါဝင်တတ်တဲ့ စကားလေးတစ်လုံး ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ မာန။ အချို့က ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုလွန်ကဲပြီး ငါပြောလိုက်ရင် မမှားဘူး၊ ငါ လုပ်လိုက်ရင် မမှားဘူးဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတွေ ကိန်းနေတတ်တယ်။ အခြားသူက သူ့အမှားတွေကို ထောက်ပြလိုက်ရင် ငါ့အမှားတော့ လာပြောနေတယ်၊ မင်းကရော မမှားတဲ့သူမို့လို့လားလို့ ခွန်းတုန့်ပြန်တတ်ကြတယ်။
အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကျတော့ ကိုယ့်အမှားကို လာထောက်ပြရင် ကျေနပ်ကြတယ်။ ကျေးဇူးတင်ကြတယ်။ ၀င်စတန်ချာချီက If you simply take up the attitude of defendingamistake, there will be no hope of improvement. အမှားတွေအတွက် အမြဲတမ်း ခုခံကာကွယ်နေတဲ့ သဘောထားရှိနေရင် တိုးတက်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မျှော်လင့်လို့ မရနိုင်တော့ဘူး….လို့ ဆိုပါတယ်။ ကိုယ်ကိုကိုယ် ခပ်မြင့်မြင့်အဆင့်မှာ ရှိနေစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်သူမှားမှား အရေးမကြီးဘူး ငါမမှားဖို့ အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်ရှိရပါမယ်။ သူများတွေ အမှားလုပ်တိုင်း ကိုယ်ကလည်း အရေးမစိုက် ဆက်မှားနေမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်လည်း သူတို့လို ဖြစ်မှာပေါ့။
အမှားလုပ်မိပြီဆိုတာနဲ့ အခြားသူတွေက အပြုသဘောနဲ့ ထောက်ပြလာရင် ၀န်ခံတတ်ဖို့ လက်ခံတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ မာနကြောင့် ၀န်မခံနိုင်ဘူး၊ လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာ အမှားပေါ်မှာ အမှားဆင့်တာပါပဲ။ အမှားကို ၀န်ခံလိုက်လို့ သိက္ခာကျသွားတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အမှားကို ၀န်မခံတာ၊ လက်မခံတာကမှ သိက္ခာကျတာပါ။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ဖို့၊ ညီညီညွတ်ညွတ်ရှိဖို့ဆိုတာ အမှားကို ၀န်ခံတတ်ဖို့လိုသလို အမှားတွေ ကျူးလွန်မိတိုင်း ဆင်ခြေလက်ခြေတွေ ပေးတတ်တဲ့အကျင့်တွေ ဖျောက်ဖို့ လိုပါတယ်။ Successful people admit faults but never make excuses အောင်မြင်သူတွေဟာ ကိုယ့်အပြစ်ကို ၀န်ခံကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ ဆင်ခြေမပေးဘူးတဲ့။
အမှားတွေထဲမှာမှ အမှားအစစ်နဲ့ နားလည်မှုလွဲတဲ့ အမှားဆိုတာတွေလည်း ရှိနေနိုင်သေးသေတယ်။ နားလည်မှုလွဲလို့ မှားတဲ့အမှားကတော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် နားလည်လိုက်တာနဲ့ ပျောက်သွားပေလိမ့်မယ်။ အမှားအစစ်တွေကတော့ ၀န်ခံခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းများနဲ့သာ အမှန်ဖြစ်နိုင်ပေလိမ့်မယ်။
အမှားတွေအကြောင်း ဟိုဟိုဒီဒီ ပြောပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း ပြန်မေးကြည့်ဖြစ်တယ်။ ငါကော အမှားတွေ ကင်းရဲ့လား။ မကင်းတာ သေချာတယ်။ ဒါဆို အဲဒီအမှားတွေကို ၀န်ခံဖြစ်ခဲ့လား၊ အမှားထောက်ပြလာသူတွေကို လက်ခံကြည်ဖြူပေးနိုင်ခဲ့ရဲ့လား။ အမှားကို ၀န်ခံသလိုလိုနဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ပြခဲ့တာတွေကရော တကယ့်အကြောင်းပြချက်တွေ ဖြစ်နေရဲ့လား။ ဆင်ခြေတွေများ ဖြစ်နေခဲ့လား။
အမှားမကင်းတဲ့လောကမှာ အမှားတွေတော့ ကျူးလွန်နေအုံးမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် မှားသွားတာတွေအတွက် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ၀န်ခံတတ်ဖို့နဲ့ အမှန်ကို ဆက်လက်သွားနိုင်ဖို့တော့ ကြိုးစားသွားရမှာပဲ မဟုတ်လား။
Posted by lwin at 9:37 AM No comments:
တစ်နေ့က မိသားစုလို ခင်မင်ရသော အိမ်တစ်အိမ်ကို ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ ရောက်သွားတယ်။ သူတို့မှာ မိသားစု ၆-ယောက်ရှိရာ သမီးလေးတစ်ဦးသာ ပါတယ်။ အငယ်ဆုံးလေး။ အစ်ကိုတွေက စုပြီးဝိုင်းချစ်ကြတယ်။ အစ်ကိုတွေရဲ့ အသင်အပြကောင်းမှုနဲ့ မိဘတွေရဲ့ နွေးထွေးတဲ့ မေတ္တာကြောင့် သမီးလေးက အပြောအဆို၊ အမူအရာ အရမ်းချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်။ သူလေးရဲ့ အသက်က အခုမှ ၈-နှစ်။ ဆံပင်လေးတွေက ခပ်ရှည်ရှည်၊ ကျစ်ဆံမြီးလေးလည်း ကျစ်လို့ ထားတယ်။ အိမ်ရောက်လာတဲ့သူတိုင်းက ချစ်ကြတယ်။ တစ်နေ့နေ့ခင်း ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲ သူ့အမေနဲ့ စ နောက်နေကြတာ တွေ့ရတယ်။ အိမ်ထဲကို ၀င်ဝင်ချင်း ကြားလိုက်ရတဲ့ သူ့အသံလေးက “ပါးပါး ညာတယ်”ဆိုတဲ့ ချစ်စရာအသံလေးပါပဲ။
စာရေးသူမှာ အကျင့်တစ်ခု ရှိတယ်။ ရုတ်တရက်တွေ့ကြုံလိုက်ရတဲ့ အမြင်အာရုံတစ်ခုခု၊ အသံတစ်ခုခုနဲ့ ကြုံတွေ့လိုက်တိုင်းမှာ မူလအနက်အဓိပ္ပာယ်ကနေ သွေဖီပြီး ဖြန့်ကျက်စဉ်းစားတတ်ခြင်းပါပဲ။ သာသနာ့တက္ကသိုလ်မှာ ပုဂံခေတ်ကျောက်စာတွေ သင်ရစဉ်က ရာဇကုမာရ်ကျောက်စာ သို့မဟုတ် မြစေတီကျောက်စာကို ဖတ်တဲ့အခါမှာ “အတည်မဲ့သောသဘောတရားကို အမှတ်ရအောက်မေ့၍”ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ အတည်မဲ့ ဆိုတဲ့ စာသားလေးက ရင်ကို စွဲငြိသွားတယ်။ ဒီစာသားလေးက စာသင်ခန်းထဲကနေ ဘ၀ထဲထိ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ တစ်ခုခုတွေးလိုက်တိုင်း ဒီစကားလုံးလေးက ၀င်ဝင်လာတတ်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ စာရေးသူရဲ့ ကလောင်အမည်ကို “အတည်မဲ့”လို့ ပေးဖြစ်သွားခဲ့တယ်။
ဆူနာမီဆရာတော်ရဲ့ တရားတစ်ပုဒ်ကို နာရစဉ်ကလည်း ဘာကိုမှ မသိမ်းပိုက်ထားဖို့ ဆရာတော်က ပြောတယ်။ တရားကို ဆက်နာလို့ အဆင်မပြေတော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ “မသိမ်းပိုက်”ဆိုတဲ့စာသားလေးက စာရေးသူကို သိမ်းပိုက်သွားခဲ့လို့ပါပဲ။ အခြားသူတွေအတွက်တော့ အူကြောင်ကြောင်နိုင်တယ် ထင်မလား မသိဘူး။ စာရေးသူဟာ အဲဒီလိုပဲ၊ နေရာတိုင်းမှာ စကားတွေပြောတိုင်းပြောတိုင်း “ခိုက်”သွားတဲ့စကားလုံးလေးတွေပါရင် ဆက်ပြောလို့ သိပ်မရတတ်တော့ဘူး။
အခုပဲ ကြည့်လေ။ ၈-နှစ်သမီးလေးရဲ့ “ပါးပါး ညာတယ်”ဆိုတဲ့ စကားလေးရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို ခံလိုက်ရပြန်ပြီ။ သူလေးကတော့ သူ့အဖေက ကာတွန်းကားပြမယ်ဆိုပြီး မပြပေးဘဲနဲ့ အိမ်အပြင်ထွက်သွားခဲ့လို့လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ ဘာဆန်းလဲ။ ဘာမှ မဆန်းဘူး။ အဲဒီမဆန်းတဲ့ စကားလေးက စာရေးသူကို ဘာလို့ ခိုက်သွားစေခဲ့တာလဲ။ သူပြောတဲ့စကားထဲက “ပါးပါး” ဆိုတာက “သူ့အဖေ”ကို ရည်ညွှန်းတာ။ စာရေးသူက “ပါးပါး” ဆိုတာ “နည်းနည်းလေး၊ ပါးပါးလေး၊ မသိမသာလေး”ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို တွေးလိုက်တယ်။ “ပါးပါးလေး ညာတယ်၊ မသိမသာ ညာတယ်”ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပေါ့။
လူအသီးသီးမှာ ခံစားချက်လေးတွေ ကိုယ်စီရှိကြတယ်။ သူတို့ ခံစားချက်လေးတွေက သူ့တို့မျက်နှာမှာ၊ သူတို့ မျက်လုံးမှာ၊ သူတို့ အမူအရာတွေမှာ၊ သူတို့ အပြောအဆိုတွေမှာ ထင်ဟပ်နေကြတယ်။ ခံစားချက်ဆိုတာက တစ်မျိုးထဲ မဟုတ်တတ်လေဘူး။ သူ ပတ်သက်နေရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ သူ ဆက်ဆံနေရတဲ့ အသိမိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်း၊ မိသားစု စတာတွေက သူ့ ခံစားချက်တွေရဲ့ ပေါက်ဖွားရာပေါ့။ ဒါက လက်တွေ့ကျတဲ့ ခံစားချက်ပေါက်ဖွားရာ နယ်မြေတွေပေါ့။ လက်တွေ့ကနေ ဝေးကွာတဲ့ ပါရမီ၊ ဗီဇ စတာတွေလည်း ခံစားချက်ကို တစ်နည်းတစ်ဖုံ လွှမ်းမိုးမှု ရှိနေတတ်ပြန်ပါတယ်။
စာရေးသူက “ပါးပါး ညာတယ်”စကားလုံးလေးကို ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာ ဒီစကားလုံးလေး မကြားခင်မှာ ကိုယ်ဆက်ဆံနေရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သံသယလေးတွေ ရှိနေခဲ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို ပါးပါးလေး ညာနေကြပါလားဆိုတဲ့ အသိဓာတ်ခံကို ဘာမဟုတ်တဲ့ “ပါးပါး ညာတယ်”စကားလုံးလေးက လှုပ်နှိုးပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ သဘောပါပဲ။ ဆက်တွေးမိတယ်။ ဒါဆိုရင် “ပါးပါး မညာသင့်ဘူး”လို့ ပြောပြန်ရင်လည်း ထွက်လာမယ့် ဂယက်အနက်က ပါးပါးလေး ညာတာ မဟုတ်တော့ပြန်ဘူး။ “များများ ညာသင့်တယ်”လို့ ပြောသလို ဖြစ်နေပြန်ရော။
နေ့စဉ် သုံးနှုန်းနေရတဲ့ ၀ါကျ၊ စကားလုံး၊ အသံတွေရဲ့ လာရာနဲ့လားရာဟာ တစ်သမတ်တည်း ရှိမနေဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ်တွေးလိုက်သလို ဖြစ်နေတတ်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ ကိုယ့်အတွေးတွေက ကိုယ်တွေးသလို ဖြစ်မနေတတ်ဘူး။ အရာရာကို ကိုယ့်အတွေးအတိုင်းသာ ဖြစ်နေရမယ်ဆိုရင် အတ္တဆန်ရာ ကျနေမှာပေါ့။ တွေးသမျှ၊ ကြံသမျှ၊ လုပ်သမျှ ကိုယ့်သဘောအတိုင်း မဖြစ်လာရင် လူတွေဟာ လူအချင်းချင်း ပါးပါးလေး ညာတတ်ကြတယ်။
စာရေးသူကတော့ ပါးပါးလေး ညာတာထက်၊ သတ္တိရှိရှိ များများကြီး ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ညာလိုက်တာကပဲ ပိုကောင်းအုံးမယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။ ခင်မင်သူအချင်းချင်း ပါးပါးလေး ညာနေကြတာတွေ့တိုင်း မြင်ရခက်၊ ခံရခက်ပါတယ်။
တချို့က ပါးပါးလေး ညာဖြီးတာကို “ငါ အတော် စကားပြော ကျွမ်းကျင်တာပဲ”လို့ ထင်နေတတ်ကြတယ်။ လူအချင်းချင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်း၊ ခင်မင်သူအချင်းချင်း ပါးပါးလေး ညာတတ်တဲ့အကျင့်ဟာ အချင်းချင်း ပါးပါးလေး လှီးတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဖျံကျတာလို့လည်း ဆိုနိုင်လိမ့်မယ်။ ပါးပါးလေး ညာတယ်ဆိုတာက တစ်ဖက်လူကို အချဉ်သဘောသတ်မှတ်ထားလို့၊ အထင်သေးလို့ ဖြစ်တတ်တာ များပါတယ်။ ဒီလို လူမျိုးဟာ အများက မသိသေးရင်တော့ ပျော်ပျော်ပြုံးပြုံးနဲ့မော်လို့ဝင့်လို့ အောင်မြင်သူရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေလို ဖြစ်နေတတ်တယ်။ အများသိသွားပြီဆိုရင်တော့ သူ့လမ်းခရီးဟာ အကွေ့အကောက်တွေ များပါတော့မယ်။
အိမ်က ပြန်လာတော့ နေလုံးကြီးက အနောက်ဘက်မှာ ၀င်လုလု ဖြစ်နေခဲ့ပြီ။ သမီးလေးပြောတဲ့ ပါးပါးလည်း အပြင်ကနေ ပြန်လာပြီ။ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ တက္ကစီကို စောင့်ရင်း အနောက်ဘက်ကို ငေးကြည့်တော့ အမှောင်ရိပ်တွေက ကောင်းကင်ယံထက်မှာ ပါးပါးလေး ၀င်ရောက်နေကြပြီ။ မှောင်ရိပ်တွေဟာ ပါးပါးလေးကနေ ထူထူကြီး ဖြစ်လာတော့မယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ လျှပ်စစ်မီးရောင်တွေသာ မရှိရင် လောကကြီးက အမှောင်ထုထဲမှာ အထီးတည်း ဖြစ်တော့မယ်။ လောက နေရတဲ့ခဏလေးမှာ ပါးပါးလေး ညာတတ်တဲ့အကျင့်တွေ မဖျောက်နိုင်သူရဲ့ ဘ၀မှာ ထူထဲသိပ်သည်းတဲ့ အမိုက်တိုက်ကြီးက လွှမ်းမိုးလာမှာ သေချာနေပါတယ်။
ဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့၊ လိပ်ပြာလုံတဲ့ဘ၀မှာ အသက်ဆက်ရှင်ဖို့ဆိုရင် ပါးပါးလေးကော၊ ထူထူကြီးကော မညာတတ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြောပြမိပါတယ်။
အထင်သေးခြင်း၊ အချင်းချင်း၊ ကင်းရှင်းကြပါစေ။ လူအချင်းချင်း၊ လှည့်ပတ်ခြင်း၊ ကင်းခြင်းကြပါစေလို့လည်း တီးတိုးရွတ်ဆိုနေမိခဲ့ပါတယ်။
Posted by lwin at 3:04 PM2comments:
Posted by lwin at 5:38 PM No comments:
ဓမ္မစကူးလ်ဖြစ်မြောက်ရေး စုပေါင်းစည်းဝေးပွဲ (အပိုင်း...